KIAနဲ့ ကချင်လူမျိုး တို့ ​ပြောတဲ့ ​အောင်လအန်ဆိုင်းအ​ကြောင်း – Sport Gaber
KIAနဲ့ ကချင်လူမျိုး တို့ ​ပြောတဲ့ ​အောင်လအန်ဆိုင်းအ​ကြောင်း
မြန်မာ့ဂုဏ်​ဆောင် ​အောင်လအန်ဆိုင်းကို ​ဝေဖန်တိုက်ခိုက်​နေတဲ့ သူတချို့ကို KIAတပ်မ​တော်သားများနဲ့ ကချင် လူမျိုးတို့က ထိုကဲ့သို့ မပြုလုပ်ကြပါရန် ယခုကဲ့သို့ ​တောင်းပန်စကား ဆိုခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” ​အောင်လအန်ဆိုင်း ကို မဆဲကြပါနဲ့ဗျ။
ကျနော် တို့ ကချင်လူမျိုး တွေက ​အောင်လအန်ဆိုင်း ကိုအရမ်းချစ်ကြတာ။ဟိုရက်က ​အောင်လ ပွဲ ခနလေး နဲ့ နိင်လို့ပျော်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းဝင်လာလို့ ကြည့်မိတော့့
” ဟာ ဒီလူ တိုက်ပွဲ ကို ဦးစီး နေရမှာ မလား ဘာ့ကြောင့် ဖုန်း ဆက်လာတာပါလိမ့် ” တွေးပြီး တော့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တာနဲ့
” ​အောင်လ ပွဲ ဘယ်လို ဖြစ်နေ ပြီလဲ သူ နိင်မှ ဖြစ်မှာ ”
ဆိုပြီး တန်းမေးတော့တာပဲ ။
အင်း ​အောင်လ နိုင်သွားပြီညာလက်သီးကြီး နဲ့ကိုပွဲသိမ်းလိုက်တာ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားက ဘာလုပ်နေလဲစစ်မတိုက် သေးဘူး လား
ဝေးး ဆိုတဲ့ အသံတွေနဲ့ အတူ ” ခုနတုန်းက ပစ်နေကြတယ်လေ။သတင်းပေးပြီးသားပဲ အခု ​အောင်လ ပွဲ ရလဒ် သိချင်လို့၃ မိနစ်လောက် ဖုန်း စပီကာ ဖွင့် ပြီး ရဲဘော် တွေရော လာနားထောင် လို့ရအောင်မေးနေတာ ။ စိတ်ချလိုက် တော့ ဒီည ​အောင်လ အတွက် လက်ဆောင် အနေနဲ့မအလ တွေကို အသေဆော်ပြမယ် ” တဲ့. တကယ်လည်း အောင်ပွဲ ရလာပါတယ် ။
အဲ့ဒီ လောက် ထိ ​အောင်လ ကို ချစ်ကြတာ။တိုက်ပွဲ သတင်းကို Group ထဲ သွားပြောတော့လဲ ” ခင်ဗျား ကလဲ ဘာတွေ လာပြောနေတာတုန်းဒီမှာ ​အောင်လ နိင်တဲ့ အကြောင်းကို
​ပြောနေကြတာကို ” ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတွေက ဆဲလွတ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြောတာ။ကျနော် တို့ ကချင် လူမျိုး တွေက
​အောင်လအန်ဆိုင်း ကို အရမ်းချစ်တာလို့။သူ့ကို ဆဲရင်ကျနော် တို့ ကို ဆဲတာထက် ပိုနာ တယ်ဗျ။ လူ အချို့ ဆဲနေတဲ့ ​အောင်လ ဆိုတဲ့ သူဟာ စစ်ရှောင်စခန်းက ကလေးငယ် တွေကို ပျော်ရွင်အောင် လုပ်ပေးနေသူ။နှင်းတောထဲ မှာ ကင်းစောင့်နေတဲ့ KIA ရဲဘော်ဟာ ​အောင်လ နိုင်ပြီ လို့ကြားရင် ရင်ထဲမှာ နွေးထွေး သွားကြတာ ။
​အောင်လအန်ဆိုင်း ဆိုတာ ကျနော်တို့ အတွက် အရမ်းကို ရင်းနှီးတဲ့ သူ တစ်ဦး ဗျ။ ကိုယ်နဲ့ အရမ်း ရင်းနှီးတဲ့ သူကို ဆဲရင်ဘယ်သူတွေ ကမှ မကြိုက်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ​’အောင်လ’ ကြီးကို မဆဲ ကြပါနဲ့ နော်။သူက ကျနော်တို့အတွက် မိသားစု တစ်ဦးဖြစ်လို့ပါ ။​အောင်လအန်ဆိုင်း က လက်သုံးချောင်း
မထောင် တာက ခင်ဗျားတို့ ဒုက္ခ ကို မစာနာ လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ကချင် တို့ ရဲ့ စရိုက် တမျိုး ပါ ။ကိုယ်က မကူညီ နိင်သေးရင် စိတ်ထဲ မှာပဲ ထားပြီး ကူညီ ဖို့ ကြိုးစား နေတတ်တာမျိုး ။သူ့အနေနဲ့ facebook ပေါ်ကနေ “စာနာ ပါတယ်နော်” ဘာညာ တွေ ကို လက်တွေ့ မကူညီ နိင်သေးပဲ ပြောချင် ပုံမရဘူး။
ကချင် လူမျိုး တွေ အရမ်းကို ဒုက္ခ ရောက် နေချိန်မှာ တောင် သူက ဘာမှ သိပ်ပြောတာ မရှိဘူး ။လက်တွေ့ပဲ ကူညီခဲ့တာ ။
“ပါးစပ်နဲ့ ပဲ ပြောတတ်တာ လက်တွေ့က ဘာမှမလုပ်ဘူး ဆိုတာ မျိုး အပြောခံရမှာ ကချင် တွေ ရှက်တယ် ”
သူ ကူညီ နိင်တဲ့အနေအထားမှာ ကူညီဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပြီး သား ဆိုတာ ကိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်၊​အောင်လ လက်သုံးချောင်းမထောင် လို့ စိတ်ဆိုး နေတယ်ဆိုရင်လဲ ကျနော် တို့ တွေ လက် ပေါင်းများစွာ ထောင်ပေးပါ့မယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေး အမြန်ဆုံး အနိင်ရဖို့ အသေခံကိစ္စ တွေ လုပ်စရာ ရှိရင်လည်းနောက် မတွန့် ပါဘူး ​အောင်လ ကြီး ကိုတော့ မဆဲ ကြပါနဲ့။
သူ့ကိုဆဲရင်ကျနော်တို့ စိတ်ထဲ မှာ ငါတို့ ကို အခုထိ လူအုပ်ကြီး နဲ့ အနိင်ကျင့် နေတုန်းပဲ လို့ခံစားနေရတယ် ဗျ။
ဒီ နိင်ငံ ကြီး အတွက် ကျနော်တို့ တွေ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ပြီး ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာအောင်
ကြိုးစား ပါ့မယ် ။ကျနော်တို့ ဗဟို အစိုးရ မှာလဲ အာဏာ
တက် မယူ ပါဘူး ကျနော်တို့ ပြည်နယ် ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေရရင် ကို ကျေနပ် ပါပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတူ နေလာတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကို သံယောဇဉ် ရှိပြီး သားပါ။လိုအပ်ရင် ခေါ်လိုက် ပါ။
အပြန်အလှန် အနေနဲ့ ကျနော် တို့အချစ်တော်, ကျနော်တို့ မိသားစုတစ်ဦး လိုသဘောထား တဲ့သူ ကို တော့ အပြစ်မရှိ ပဲ
မဆဲကြပါနဲ့နော်။ ဒီနေ့အထိ ​အောင်လအန်ဆိုင်း ကို ဆဲနေတာတွေ့လို့ ကျနော်တို့ ဘက်က ဘယ်လို ခံစား ရတယ် ဆိုတာ ကို ရှင်းပြ တာပါ။Credit
မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ အောငျလအနျဆိုငျးကို ဝဖေနျတိုကျခိုကျနတေဲ့ သူတခြို့ကို KIAတပျမတောျသားမြားနဲ့ ကခငြျ လူမြိုးတို့က ထိုကဲ့သို့ မပွုလုပျကွပါရနျ ယခုကဲ့သို့ တောငျးပနျစကား ဆိုခွငျး ပဲ ဖွဈပါတယျ။
” အောငျလအနျဆိုငျး ကို မဆဲကွပါနဲ့ဗြ။
ကနြောျ တို့ ကခငြျလူမြိုး တှကေ အောငျလအနျဆိုငျး ကိုအရမျးခစြျကွတာ။ဟိုရကျက အောငျလ ပှဲ ခနလေး နဲ့ နိငျလို့ပြောျနတေဲ့ အခြိနျ ဖုနျးဝငျလာလို့ ကွညျ့မိတော့
” ဟာ ဒီလူ တိုကျပှဲ ကို ဦးစီး နရေမှာ မလား ဘာ့ကွောင့ျ ဖုနျး ဆကျလာတာပါလိမျ့ ” တှေးပွီး တော့ ဖုနျးကိုငျလိုကျတာနဲ့
” အောငျလ ပှဲ ဘယျလို ဖွဈနေ ပွီလဲ သူ နိငျမှ ဖွဈမှာ ”
ဆိုပွီး တနျးမေးတော့တာပဲ ။
အငျး အောငျလ နိုငျသှားပွီညာလကျသီးကွီး နဲ့ကိုပှဲသိမျးလိုကျတာ ဒါနဲ့ ခငျဗြားက ဘာလုပျနလေဲစဈမတိုကျ သေးဘူး လား
ဝေးး ဆိုတဲ့ အသံတှနေဲ့ အတူ ” ခုနတုနျးက ပဈနကွေတယျလေ။သတငျးပေးပွီးသားပဲ အခု အောငျလ ပှဲ ရလဒျ သိခငြျလို့၃ မိနဈလောကျ ဖုနျး စပီကာ ဖှင့ျ ပွီး ရဲဘောျ တှရေော လာနားထောငျ လို့ရအောငျမေးနတော ။ စိတျခလြိုကျ တော့ ဒီည အောငျလ အတှကျ လကျဆောငျ အနနေဲ့မအလ တှကေို အသဆေောျပွမယျ ” တဲ့. တကယျလညျး အောငျပှဲ ရလာပါတယျ ။
အဲ့ဒီ လောကျ ထိ အောငျလ ကို ခစြျကွတာ။တိုကျပှဲ သတငျးကို Group ထဲ သှားပွောတော့လဲ ” ခငျဗြား ကလဲ ဘာတှေ လာပွောနတောတုနျးဒီမှာ အောငျလ နိငျတဲ့ အကွောငျးကို
ပွောနကွေတာကို ” ဆိုပွီး မိတျဆှတှေကေ ဆဲလှတျတယျ။
ဒါ့ကွောင့ျ ပွောတာ။ကနြောျ တို့ ကခငြျ လူမြိုး တှကေ
အောငျလအနျဆိုငျး ကို အရမျးခစြျတာလို့။သူ့ကို ဆဲရငျကနြောျ တို့ ကို ဆဲတာထကျ ပိုနာ တယျဗြ။ လူ အခြို့ ဆဲနတေဲ့ အောငျလ ဆိုတဲ့ သူဟာ စဈရှောငျစခနျးက ကလေးငယျ တှကေို ပြောျရှငျအောငျ လုပျပေးနသေူ။နှငျးတောထဲ မှာ ကငျးစောငျ့နတေဲ့ KIA ရဲဘောျဟာ အောငျလ နိုငျပွီ လို့ကွားရငျ ရငျထဲမှာ နှေးထှေး သှားကွတာ ။
အောငျလအနျဆိုငျး ဆိုတာ ကနြောျတို့ အတှကျ အရမျးကို ရငျးနှီးတဲ့ သူ တဈဦး ဗြ။ ကိုယျနဲ့ အရမျး ရငျးနှီးတဲ့ သူကို ဆဲရငျဘယျသူတှေ ကမှ မကွိုကျပါဘူး။ဒါ့ကွောင့ျ ’အောငျလ’ ကွီးကို မဆဲ ကွပါနဲ့ နောျ။သူက ကနြောျတို့အတှကျ မိသားစု တဈဦးဖွဈလို့ပါ ။အောငျလအနျဆိုငျး က လကျသုံးခြောငျး
မထောငျ တာက ခငျဗြားတို့ ဒုက်ခ ကို မစာနာ လို့ မဟုတျပါဘူး။ကခငြျ တို့ ရဲ့ စရိုကျ တမြိုး ပါ ။ကိုယျက မကူညီ နိငျသေးရငျ စိတျထဲ မှာပဲ ထားပွီး ကူညီ ဖို့ ကွိုးစား နတေတျတာမြိုး ။သူ့အနနေဲ့ facebook ပေါျကနေ “စာနာ ပါတယျနောျ” ဘာညာ တှေ ကို လကျတှေ့ မကူညီ နိငျသေးပဲ ပွောခငြျ ပုံမရဘူး။
ကခငြျ လူမြိုး တှေ အရမျးကို ဒုက်ခ ရောကျ နခြေိနျမှာ တောငျ သူက ဘာမှ သိပျပွောတာ မရှိဘူး ။လကျတှေ့ပဲ ကူညီခဲ့တာ ။
“ပါးစပျနဲ့ ပဲ ပွောတတျတာ လကျတှေ့က ဘာမှမလုပျဘူး ဆိုတာ မြိုး အပွောခံရမှာ ကခငြျ တှေ ရှကျတယျ ”
သူ ကူညီ နိငျတဲ့အနအေထားမှာ ကူညီဖို့ အဆငျသငျ့ ရှိနပွေီး သား ဆိုတာ ကိုတော့ယုံကွညျပါတယျ၊အောငျလ လကျသုံးခြောငျးမထောငျ လို့ စိတျဆိုး နတေယျဆိုရငျလဲ ကနြောျ တို့ တှေ လကျ ပေါငျးမြားစှာ ထောငျပေးပါ့မယျ။နှေဦးတောျလှနျရေး အမွနျဆုံး အနိငျရဖို့ အသခေံကိစ်စ တှေ လုပျစရာ ရှိရငျလညျးနောကျ မတှနျ့ ပါဘူး အောငျလ ကွီး ကိုတော့ မဆဲ ကွပါနဲ့။
သူ့ကိုဆဲရငျကနြောျတို့ စိတျထဲ မှာ ငါတို့ ကို အခုထိ လူအုပျကွီး နဲ့ အနိငျကငြျ့ နတေုနျးပဲ လို့ခံစားနရေတယျ ဗြ။
ဒီ နိငျငံ ကွီး အတှကျ ကနြောျတို့ တှေ အစှမျးကုနျ ကွိုးစား ပွီး ဖယျဒရယျ ပွညျထောငျစုကွီး ဖွဈလာအောငျ
ကွိုးစား ပါ့မယျ ။ကနြောျတို့ ဗဟို အစိုးရ မှာလဲ အာဏာ
တကျ မယူ ပါဘူး ကနြောျတို့ ပွညျနယျ ထဲမှာ ငွိမျးခမြျးစှာနရေရငျ ကို ကြနေပျ ပါပွီ။နှဈပေါငျးမြားစှာ အတူတူ နလောတဲ့ ခငျဗြားတို့ ကို သံယောဇဉျ ရှိပွီး သားပါ။လိုအပျရငျ ခေါျလိုကျ ပါ။
အပွနျအလှနျ အနနေဲ့ ကနြောျ တို့အခစြျတောျ, ကနြောျတို့ မိသားစုတဈဦး လိုသဘောထား တဲ့သူ ကို တော့ အပွဈမရှိ ပဲ
မဆဲကွပါနဲ့နောျ။ ဒီနေ့အထိ အောငျလအနျဆိုငျး ကို ဆဲနတောတှေ့လို့ ကနြောျတို့ ဘကျက ဘယျလို ခံစား ရတယျ ဆိုတာ ကို ရှငျးပွ တာပါ။
ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းကို အတိုင်းအတာတခုအထိ ထိန်းထားနိုင်ဟု အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင် ဗြောင်လိမ်
ချီတက်လာရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရွာတိုင်းကကြိုဆိုကြပြီး အားပေးကြတာကြောင့် ပီတိဖြစ်နေကြတဲ့ PDFလူငယ်လေးများ